ISifundo seNyunithi yeSizwe saseNew York - IJografi, iiMpawu zeSizwe kunye neNyaniso
Ootitshala IJografi yeeNkalo zoPhando
Study Unit Unit - eNew York
Uchungechunge lweeNkalo zoLwazi kwii-50 zezizwe.
Ezi zifundo zecandelo lombutho zenzelwe ukunceda abantwana bafunde i- geography yase-United States baze bafunde ulwazi oluchanileyo malunga nawo wonke urhulumente. Ezi zifundo zinkulu kubantwana kwimfundo karhulumente kunye neyimfihlo kunye nabantwana abakumakhaya.
Phrinta i- United States Imephu kunye nombala ngamnye kwisimo njengoko ufunda. Gcina imephu phambi kwepotokethi yakho ukuze isebenziswe ngurhulumente ngamnye.
Phrinta iSebe leNgcaciso kaRhulumente kwaye ugcwalise ulwazi njengoko uyifumana.
Phrinta i- New York State Outline Map uze ugcwalise i-capital city, izixeko ezinkulu kunye nezikhangiso zombuso ozifumanayo.
Phendula le mibuzo elandelayo kumaphepha afakwe kwiimvakalisi ezipheleleyo.
I-State Capital Yintoni eyinkunzi?
Uhambo oluKhenketho lweCape Capitol
Ifowuni Yombuso Yintoni Ubulungisa obambelelayo kwaye bajonge ntoni?
I-Flag Quiz / Printout
Iintyatyambo Zombuso Ngaliphi iifama zaseburhulumenteni?
Isiqhamo Sombuso nini isithelo selizwe samukelwa?
Umbuso weSizwe Iintaka zibuyela ngasentla?
Umbuso Wezilwanyana Yintoni iilwanyana zaseburhulumenteni?
Iintlanzi zoMbuso Iintlanzi zifumaneka phi?
Inambuzane kaRhulumente njani le nambuzane inceda njani abalimi begadi?
I-State Fossil Yisiphi isiqabana esi sidibeneyo?
I-Shell yeSizwe Ziya kubhukuda njani lezi zikhwebu?
Umthi wesizwe Xa umthi wesizwe wamukelwa nini?
Isiqendu sombuso Nguwuphi umbala le nto?
IsiNgoma sombuso Ngubani obhala ingoma yombuso?
Utywina lweSizwe Ubungqina obunje bwenziwa nini?
I-Motto yesizwe Yintoni i-motto yesizwe kwaye ithetha ntoni?
I-State Muffin Yenza lo mzobo wombuso kwaye ujabulele kunye nesiphuzo sombuso!
Isiselo seSizwe Yintoni isiselo sesizwe?
Amaphepha angaphenduliweyo eNew York - Funda kabanzi ngeNew York ngala maphepha okusebenzela okuprintwayo kunye namaphepha ombala.
Ziyolise kwiKiko - I-muffin esemthethweni yaseNew York State, i-Apple Muffin, idalwe ngabantwana besikolo esiphakathi kwi-North Syracuse, eNew York.
Zama iresiphi yabo esemthethweni.
AbaMongameli abazalwe eNew York:
Imbali - Funda malunga nembali yaseNew York.
I-Big Apple Factoids - Umdlalo ohambelana neNew York - qi niseka ukuba ufunde amaqiniso emva kokufumana umdlalo!
I-New York Underground - Abantu baseNew York bahamba ngokungazi into eyenzekayo phantsi kweenyawo zabo: Amandla, izimpukane zeenkcukacha, kunye nokuhamba kwe-steam. Hamba uhambo olujikelezayo oluphantsi komhlaba!
I-Niagara: Ibali le-Falls - Thatha uhambo ngaphantsi koMlambo weNiagara owonakele, udlalele i-daredevil trivia adventure, uhlolisise ixesha lokuqala lokuwa, uze ufumane amabali amangalisayo kwiimpawu zokuwa.
Ukwakhiwa koBukumkani baseBukhosi - Fumana amaqiniso amnandi, hamba kwi-tour yefoto, uze udlale imidlalo.
Isakhiwo se-Chrysler - Iifoto zeso sixeko saseNew York.
I-Word Search - Fumana amagama adibeneyo aseNew York ahlobene.
Incwadi Yemibala - Phrinta uze umbala le mizobo yamatshwayo aseburhulumenteni aseNew York.
Amazwi Okuzonwabisa - Yintoni ebizwa ngokuba ngumlambo omde kakhulu? Funda le nyaniso yeNew York kunye nokufumanisa.
Imizuzu yeCapitol - Ukunikezelwa kwengcaciso emfutshane kwenzalo yembali kunye nemfundo.
Intaba yaseBuck - Thatha intaba yeBuck Mountain.
I-Crossword Puzzle - Ngaba unokuyicombulula ipastiki ye-crossword?
I-Word Find - Fumana iindawo ezifihliweyo zaseNew York Regions.
I-Word Scramble - Ngaba unganqabana nale mibonakalo yeeNew York State?
Okungekho Mthetho weNew York: Umthetho wawungekho mthethweni ukufaka ingcango kunye nokuphazamisa umhlali wendlu.
Isifundo Seyunithi Yombuso - eMichigan
Study Unit Unit - Washington
I-80s Iingoma eziphezulu kwi-Hard-Rocking Glam Metal Band Dokken
Isikhokelo soMqala kwiBhola